Soomaaliya: Dilkii Cali Jabal waxey wiiqeysaa falalka argagaxisada ay shacabka ku ugaarsanayaan – Balcad.com Teyteyleey
Soomaaliya: Dilkii Cali Jabal waxey wiiqeysaa falalka argagaxisada ay shacabka ku ugaarsanayaan
Ilwareed Online – Muqdisho, 4 August 2017 – Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Dilkii Cali Maxamed Xuseen (Cali Jabal) oo lagu dilly weerarkii 30k a July 2017 inay wiiqeyso falalka argagaxisada ay shacabka ku ugaarsanayaan.
Cali Jabal waxuu ka mid ahaa hojoogayaasha kooxda argagaxisada ah ee Al-Shabaab, waxuuna mas’uul uga ahaa caasimada Muqdisho oo uu ka danbeeyey falalkii argagaxisadu ku beegsanayeen shacabka Soomaaliyeed.
Dowlada Federaalka Soomaaliya waxey ku faraxsantahay in weerarkii lagu beegsanayey Cali Jabal ee agagaarka Toorotoorow ee gobolka Shabeelaha Hoose uu guul ku dhammaaday oo lagu dilay. Dowladu waxey u mahadcelineysaa wadashaqeynta dhow ee dalalka saaxiibada oo ka wada shaqeeya sidii kooxaha argagaxisada ah looga sifeyn lahaa dalka oo dhan.
Sababta ay Dowladu u xoojineyso dagaalka lagula jira kooxaha argagaxisada ayaa ah sidii loo wiiqi lahaa inay shacabka u soo maleegaan walxaha qarxa oo loo diido waqti ay ku nastaan. Weerarada noocan ah waa kuwo sii soconaya, waxaana u habboon in kooxahaas ay is soo dhiibaan oo ay nabada qaataan. Dilka Cali Jabal ayaa ku yimid wadashaqeyn iyo bartilmaameysi mudo lagu ugaarsanayey oo tuseysa kuwa isaga oo kale ah inaysan marnaba fakaneynin oo dariiqa kaliya ee u furan uu yahay inay Dowlada isu soo dhiibaan oo ay ka faa’iideystaan cafiskii Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
Dowladda Federaalka waxaa ka go’an sidii loo badbaadin lahaa shacabka isla markaasna loo sugi lahaa amniga iyo nabadeynta, si shacabka ay u helaan neecow nabdeed oo ay uga qeybqaadan karaan horumarka dalkooda iyagoon ka walwaleynin qaraxyada kooxaha argagaxisada ah.
The post Soomaaliya: Dilkii Cali Jabal waxey wiiqeysaa falalka argagaxisada ay shacabka ku ugaarsanayaan appeared first on Ilwareed Online.
Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo faaruqiyay saldhigoodii Leego
41 Jir Kufsi Iyo Dil Isugu Daray gabar yar oo 3 Jir Ah Oo Si Adag Loo Qisaasay